मन्त्री बन्न नेकपा तछाड मछाड, कसले मार्ला बाजी ? | सु-सुचित नेपालको चित्र
मन्त्री बन्न नेकपा तछाड मछाड, कसले मार्ला बाजी ?
प्रधानमन्त्री एबं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको वर्तमान मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गर्ने जानकारी बाहिरिए लगत्तै नेताहरुको दौडधुप बढेको छ । नेकपाका अधिकांस नेताहरु अहिले मन्त्री बन्ने लबिङमा लागेका छन् ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि केहि दिन पहिले प्रधानमन्त्री ओलीसंग मन्त्री मण्डल परिवर्तनबारे छलफल भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले नेताहरुको दौड्धुप बढेको हो ।
तर, मनत्रीमण्डल परिवर्तनको हल्ला फैलिएपछि मन्त्री बन्न विभिन्न नेताहरुको दौडधुप बढेको छ । यस्तो सुचीमा छन्, नेता हरिबोल गजुरेल । गजुरेललाई कृषि मन्त्रालय सम्हाल्ने गरि जिम्मेवारी दिने जनाइए पनि उनले अर्थ मन्त्रालय ताकेर बसेको स्रोतको दाबी छ । यस्तो सुचीमा नेताहरु जनार्दन शर्मा, योगेश भट्टराई, रेखा शर्मा र महेश बस्नेत लगायतका नेताहरु रहेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई फिर्ता बोलाएर जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’लाई ल्याउने प्रस्ताव प्रचण्डलाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले शर्मालाई ल्याएर गृहप्रशासनमाथि राम्रो उपस्थिति जनाउन चाहेको स्रोतको दाबी छ। शर्माले यसअघि सम्हालेका मन्त्रालय उर्जा र गृह राम्ररी सम्पादन गरेको भन्दै उनलाई ल्याउन खोजिएको थियो । तर, पार्टीमा दुबै अध्यक्षबीच विभिन्न राजनीतिक खेल सुरु भएपछि यो कुरा यत्तिकैमा सेलाएको थियो भने नेता शर्माले आफू मन्त्री बन्न कसरत नगरेको भन्दै स्पष्ठिकरण समेत दिएका थिए ।